Daahfurka nooca Isbaanishka ee tifaftiraha garaafka ee Canva | Abuurista khadka tooska ah
Canva waa codsi online ah oo loo adeegsaday naqshadeynta garaafka, taas oo caan ka noqotay in ka badan 10 milyan oo qof oo adduunka ka adeegsada oo 25.000 oo keliya ayaa deggan Spain.
Dhawaan ayaa wararka muhimadda weyn leh ay noqdeen bilaabista nooca Isbaanishka ee tifaftiraha garaafka ee Canva, taas oo marka lagu daro in la hagaajiyay si afkeena loogu fahmi karo, ay ku jiraan noocyo kala duwan oo naqshado cusub iyo moodello ah si loo habeeyo la jaanqaadka dhammaan dhadhanka iyo dabaaldeg kasta.
Muxuu noo keenayaa nooca cusub ee Canva?
Iyadoo horumarin cusub oo dhameystiran loogu talagalay codsigan inuu ka mid noqdo suuqa Isbaanishka, shirkaddu waxay sii wadaa socodkeeda balaarinta iyo soo koobida luuqadaha inta badan laga isticmaalo adduunka dhexdiisa bartamihii ugu dambeeyay ee 2017, oo ay ku jiraan koorsada sanadka qiyaastii 20 ka mid ah.
App Tani waa taageero dhameystiran loo adeegsaday naqshadeynta garaafka, u oggolaanshaha dadka aan aqoon u lahayn mowduucan, tafatirka ama kuwa aan garan karin sida wax loo sawiro, inay awoodaan inay maareeyaan, taas oo macnaheedu yahay tan, in Canva Way fududahay in la isticmaalo intaas ka sokow, looma baahna in wax lagu rakibo kombiyuutarka, maadaama uu gebi ahaanba ka shaqeynayo shabakadda internetka.
Dabcan, Canva waxay u baahan tahay adeegsi koonto shaqsiyeed bilaash ah, taas oo si fudud lagu gaari karo cinwaanka emaylkaaga ama xogta ay bixiso koontadaada Facebook ama haddii aad doorbideyso inaad isticmaasho google.
Ka dib markaan ku galno koontadayada isticmaale, Canva waan awoodnaa samee boodhadh, kaararka salaanta, bandhigyo iyo waxyaabo kale oo aad u tiro badan. Furaha codsigan ayaa ah inay leedahay shaqooyin badan oo kala duwan oo diyaar u ah inay adeegsadaan, sida sawirada keydka, vektoorrada iyo kuwa kale oo badan oo loo isticmaali karo naqshad kasta, taas oo waliba lagu dari karo sawirada aad jeceshahay ama sawirada oo noqon kara laga soo raray PC. Oo weliba waxaa ku jira tiro badan miirayaasha sawirka, noocyada, astaamaha iyo istiikarada gebi ahaanba bilaash ah, oo aan dooran karno inaan ku isticmaalno fikrado badan oo aan la nimaadno, samaynta isticmaalka Canva mid aad u fudud.
Marka lagu daro waxyaabaha aan soo sheegnay, Canva waxay leedahay horumarin dheeri ah oo ku habboon caadooyinkayaga iyo dhadhanka maxalliga ah ee loogu talagalay xafladaha ama dhacdo kasta oo kale oo lagu muujiyey jadwalka, taas oo muujineysa inaysan ahayn tarjumaadda Isbaanishka ee shaqooyinka ee ka muuqda shaashadda.
Marka laga reebo soo bandhigida nooca Isbaanishka ee Tifatiraha garaafyada CanvaWaxaa lagu heli karaa luqado kale oo ka mid ah wadamada adduunka sida Ingiriiska, Faransiiska, Ruushka, Jarmalka, Polishka, Bahasa Indooniisiya, Bortuqiis Barsiili iyo noocyo kala duwan oo Isbaanish ah, ama Isbaanish ama dalal Latin Latin ah oo kala duwan. Waxay ka dhigan tahay in gebi ahaanba, 1600 milyan oo qof ayaa isticmaali kara barnaamijkan afkaaga hooyo.
Tan iyo markii la bilaabay 2014, in ka badan 80 milyan oo naqshadood ayaa la sameeyay iyada oo loo mahadcelinayo tifaftiraha garaafka ee Canva, xawaare ku dhow 3 naqshadood oo cusub halkii labaad, oo ka mid ah 2,4 milyan oo ka mid ah ay ka tirsan yihiin Isbaanish, tanina waxay ka mid tahay waddamada ugu khuseeya Canva, sababo la xiriira tirada badan ee dadka isticmaala arjiga. Iyo xaqiiqda xiisaha leh waxaan dhihi karnaa in magaalooyinka Valencia, Madrid iyo Barcelona ay tahay meesha codsigan inta badan laga isticmaalo.
"Canva waxay ahayd barxad caalami ah laga soo bilaabo maalinti koowaad, himiladeenuna waxay ahayd inaan u diyaarino dhammaan dadka isticmaala internetka, meel kastoo ay ka yimaadaan.Melanie Perkins ayaa sidaas tidhi. Iyo in iyaguna ay ku dhex leeyihiin qorshayaashooda ku dar 8 luqadood oo cusub, sida Jabbaan, Thai, Yukreeniyaan, Turki iyo Malay. Ku darista faallo ahaan Melanie Perkins ereyada: “Waxaan rajeyneynaa in App-ka laga heli karo dhammaan luqadaha loogu isticmaalka badan yahay dhammaadka 2017."
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Bilaabidda nooca Isbaanishka ee tifaftiraha garaafyada ee Canva
Ku hagaaji tayada sawir leh Photoshop